Somaliland Oo Ka Hadashay Dacwadda Ka Dhanka Ah Heshiiska DP World Ee Ay Dawladda Muqdisho U Gudbisay Qaramadda Midoobay | SDWO.COM & SomalilandNews.net
Hargaysa (SDWO): Xukuumadda jamhuuriyadda Somaliland ayaa wax lala yaabo iyo mid aan waxba ka bedeli doonin ku tilmaantay dacwadda ka dhanka ah heshiiska dekadda Berbera ee ay dawladda federaalka Soomaaliya u gudbisay qaramadda midoobay.
Wasiirka arrimaha Somaliland Dr. Sacad Cali Shire, oo maanta warbaahinta kula hadlay magaaladda Hargaysa ayaa sheegay in aanay Soomaaliya awood u lahayn in ay ka dacwooto heshiiskaasi, maadaama oo aanay iyadu ka talilin dhulka Somaliland.
Wasiir Sacad, waxa uu sheegay heshiska ay Somaliland la gashay shirkadda DP World aanu waxba ka duwanayn heshiisyadii ay hore ula geli jirtay dawladaha iyo shirkadaha caalamka. Waxaanu yidhi “Heshiisyadda ay Somaliland la gasho caalamka intiisa kale waa xalaal, waana sharci.
Heshiiska aan la galnay shirkadda DP World-na wuxuun buu la mid yahay heshiisyadii aanu hore ula geli jirnay shirkadaha iyo dawladaha caalamka”.
“Cid-naba laguma dacweyn karro heshiiskaasi aanu la galnay dawladda imaaraadka carabta iyo shirkadda DP World. Waana heshiis dhaqaale iyo horumarineed, oo u dan ah dad reer Somaliland, dadka reer Itoobiya, dadka reer Soomaaliya iyo bulshadda Geeska Afrikoo dhan, oo ay tahay in la soo dhaweeyo. Balse in la dacweeyo ma aha”ayuu yidhi wasiirka arrimaha dibadda Somaliland.
Isagoo hadalkiisa sii watayna waxa uu yidhi “Dawladda federaalka Soomaaliya meel ayay ka talisaa, oo sharcigeedda iyo xukunkeedu ka socdaa, wixii kuwaa khuseeya intay ka taliso haka dacwooto, laakiin meel aanay kaba talinin, kama dacwoon karto”.